China Factory ampahany amin'ny famokarana scenario sy mpanamboatra | Zhenyuan
Seho ara-teknika sy fanavaozana: milina fivorian'ny SKHZ-B nc H-beam
1. Ny fomba famokarana welding-H-beam dia ny fametrahana h-beam araka ny endrika "Work" ary atsofohy ny zoro roa amin'ny zorony roa amin'ny fotoana iray, izay mampitombo be ny fahombiazan'ny welding. Noho ny welding symmetrika, ny tranonkala amin'ny ankapobeny tsy simba aorian'ny fangejana.
2. Ny mekanisma orthotic H-milina flange straightening machine dia afaka manitsy mivantana ny fiovan'ny Angle ny takelaka elatra vy miendrika H aorian'ny fametahana amin'ny alàlan'ny fanodinana gazety eccentric, izay mampihena ny hery manitsy ary manatsara ny fahamendrehana manitsy.
3. Avy amin'ny fomba fijerin'ny famaritana las, ny famaritana ny welding H-beam no lehibe indrindra ao Shina, ary ny mari-pamantarana ny tsipika famokarana h-beam an'ny orinasam-pamokarana fitaovana h-beam farany mandroso (ESAB Company) any ivelany dia ny toy izany koa.
4. Amin'ny alàlan'ny fanangonana sy ny fananganana, ny fandraisana ny fivondronana sy ny fananganana dia raisina, izay mampihena ny fomba fiasa ary manatsara ny fahombiazan'ny famokarana.
5. Ao amin'ny maody afovoan'ny tranokala sy ny takelaka flange, ny maodely roa an'ny foibe manoloana sy aoriana dia raisina hanatsarana ny fahamendrehan'ny fametrahana.
6. Wire feeder dia malefaka mifamatotra amin'ny welding basy sy welding Angle ny welding basy azo ahitsy.
7. Weld fillet lehibe, mampiasa tariby indroa (DC + AC) tariby roa, arofanina roa, fizotran'ny fantsom-pisakafoanana indroa. Ireo fampiasa an'ity tsipika famokarana ity no voalohany amin'ny karazany any Shina.
8. Fanaraha-maso PLC ampidirina, azo antoka, mora fandaharana.
9. Ao amin'io toby io ihany, famaranana mitohy ny h-beam amin'ny fizotry ny fananganana, fangejana, orthopedika, fampiakarana, famoahana ary fomba hafa.
Mpitsara flange mijidina Khj-c
Skhj-c marindrano flange calibrator dia ampiasaina amin'ny famolavolana flange ny vy H-beam. Rehefa vita ny H-beam, dia hovaina ny takelaka elatra h-beam eo ambanin'ny asan'ny fampiharana welding, ary tsy maintsy ahitsy eo alohany Ity fitaovana ity dia ampiasaina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny lovia elatry ny h-beam sy ny T-beam aorian'ny fangejana.
Ireto misy fitaovana hafa:
Masinina manapaka / milina fanapahana bara mahitsy maromaro, milina fanapahana vy CGL-4000 / SECTION, milina fanapahana KT-462 / semi-mandeha ho azy, masinina fanapahana kopia CG2-150B / kopia, KG-30 / CNC milina fandavahana telo Bai / milina fandavahana radial, 7-3040 * 16 / masinina fanapahana kodiarana Magnetika, SAG- / lathe, CA6140 / fandavahana sy milina fikosoham-bary, ZX-32 / mandrindra machine mankaleo, T4240 / milina fanapahana tsipika, BH6070 / press vertika, Ya32-31 / gazety marindrano, DC-315 / milina fanetezana lovia milina famaohana NZA-1000 / boaty fanamainana electrode HY704-4
- lafaoro fanamainana 50 / flux HI / 4 l - 20 compresseur rivotra elektrika / mpamokatra gazoala, milina 200 kw / sandblasting PBS - milina famafazana loko 10000 GPQ9C / kamiao b / fampandehanana CDWllHNC CPQ - 1-50 * 2500 / roller welding frame HGZ - milina fanitsiana 5 a / flange YTJ 50 / detector lesoka ultrasonika ECHOPE220 / metatra mari-pana nomerika RKCDP - 500 / refy fandrefesana sary mihetsika 345 fb '- MK Ⅱ / digital clip-on ammeter 2003 / mari-pana sy metatra hamandoana WHM5 / welding Mpanaparitaka lesoka motoSS / satroka andriamby DA-400S / calverner vernier.
Fanapahana ny akora vita amin'ny lasantsy → fanangonana akora → fantson-tànana → fanitsiana → fitsaboana ambony → hosodoko
Previous: Rack System
Manaraka: Fampisehoana ampahany amin'ny vokatra avy amin'ny orinasa
Fanamboarana ny faritra iasan'ny orinasa